I-Instagram, Ungayitshintsha njani iNgoma kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Khange yenzeke kuwe Izinto eziqhelekileyo ziphela zikudika, Into yokuba wonke umntu anayo kunxibelelwano lwasentlalweni iyakudika, okanye ubone nje iwonga okanye upapasho lwabanye abasebenzisi kwaye ndathi ndifuna ukutshintsha iileta ze-Instagram yam kanye njengoko wenzayo.
Ewe, ukuba ungomnye wabo bathanda utshintsho kwinkangeleko kwinethiwekhi yakho. Apha siza kukunika ezinye Iingcebiso zokutshintsha ileta ye-Instagram yakho, ukuze iiposti zakho zivele kwabanye. Unokwenza oku kwi-biografi yakho okanye kwiimpapasho zakho, apha siza kukufundisa ukuba ungayenza njani loo leta itshintshe kwii-biographies zakho. Into yokuqala kukukhetha ifonti oyithandayo.
Phakathi kwezona zisetyenzisiweyo sinokuzikhankanya:
Iifonti ezipholileyo ze-inatagram.
Kwifayile yakho iimpapasho.
Kwifayile yakho izimvo.
Kwifayile yakho iimbali.
Kubalulekile ukuba Landela la manyathelo aboniswe sisicelo Ukwenza utshintsho oluhambelanayo, kumagqabantshintshi, amabali kunye nakupapasho kufuneka ulandele amanyathelo osoloko uwalandela ukwenza nganye yezi.
Kwimeko yeprofayile yakhoKuya kufuneka uyenze ngokulandela imiyalelo oyinikwa yinkqubo ye-Instagram kolu tshintsho, khumbula ukuba kufuneka usike isicatshulwa kwisicelo seetekisi kwaye usincamathisele kwindawo ehambelana ne-Instagram njengoko uthatha isigqibo.
Ukuba ungomnye we abantu abathanda ukugqama Sicebisa ukuba usebenzise iifonti ezahlukeneyo kukhetho ngalunye lwe-Instagram, Oko kukuthi, enye yezithuba, enye yezimvo, njalo njalo.
Kodwa soloko ukhumbula ukukhetha iifonti ezicacileyo nezifundekayo, ayizizo zonke, kwaye ayizizo zonke ezihamba kakuhle nesicelo, kodwa oko sele kuxhomekeke kwisitayile sakho kunye nobuntu.
Uyenza njani inguquko:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile fumana usetyenziso ndikunike iindlela ezininzi zokwenza olu tshintsho.
Kukho iinketho ezininzi ngokubhekisele kutshintsho lweleta ye-Instagram, ezinje ngezo ziboniswe apha ngasentla, ezi ziyahambelana nesicelo kwaye unokufumana ngaphakathi kwizikhangeli zePC yakho.
Nje ukuba ukhethe oyena mntu uthanda ukusebenza naye, kufuneka ungenise imithombo yesicelo, phakathi kwamacandelo akhethiweyo kwaye ukhethe ibhokisi eya kukuvumela ukuba ubhale isicatshulwa ofuna ukusibeka kwizithuba zakho.
Isicelo siya kukuvumela ube nombono wombhalo Kuxhomekeka kwifonti oyikhethileyo, oku kuya kukunika umbono wokubonakala kokubhaliweyo kunye nonobumba, ungaqhubeka nokukhetha izicingo njengoko uvavanya.
Nje ukuba ukhethe oyithandayo kakhulu, ukuba uyayifuna ngoonobumba abakhulu, okanye ngqindilili, ngokufutshane, uthatha isigqibo, ukopa umbhalo.
Ngena kwiakhawunti yakho ye-Instagram ngendlela eqhelekileyo, ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Kwaye ubeke isicatshulwa kunye nefonti oyikhethileyo kwindawo ehambelana nokupapashwa.
1 Ukukhethwa komthombo:
1.2 Uyenza njani inguquko: